လူ သိန်းဂဏန်းရှိသော မြို့နယ်များတွင် ရွေး/ကော် ဝန်ထမ်း သုံး၊ လေးဦးသာရှိဟုဆို - Yangon Media Group
လူဦးရေ သိန်းဂဏန်းရှိသော မြို့နယ်များတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဝန်ထမ်း သုံး၊ လေးဦးသာရှိ ကြောင်း ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ပြောသည်။ မတ် ၁၅ ရက် ရန်ကုန်မြို့ Park Royal Hotel ၌ ပြုလုပ်သည့် ”နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့ ANFREL ၏ ၂ဝ၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်းနှင့်လာမည့် ၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင် ရေး အခြေခံအုတ်မြစ်တည်ဆောက် ရေး”အခမ်းအနားတွင် မီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုကို ယင်းသို့ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”တစ်မြို့နယ်မှာ UEC ဝန်ထမ်း သုံး၊ လေးဦးပဲရှိတယ်။ အဲဒီ မြို့နယ်တွေမှာ လူဦးရေက သိန်းဂဏန်းလောက်ရှိတယ်။ လှိုင်သာယာဆို ခုနစ်သိန်းတောင်ရှိတယ်။ အဲဒီလိုလူဦးရေကို ရွေးကောက်ပွဲမှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်း သုံး၊ လေးဦးနဲ့ ဘယ်လိုမှ ကောက်လို့မရဘူး။ (မဲစာရင်း ကောက်ယူမှု)”ဟု ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းကပြောသည်။ အဆိုပါ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်မှ ပြည် ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲအနေဖြင့် လိုအပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနများသို့ အကူအညီ တောင်းခံ ခွင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
”မဲစာရင်းက အခြေခံစာရင်းလိုတယ်။ အခြေခံစာရင်းပေးနိုင်တဲ့ဌာနက အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန။ သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သူ့ဆီမှာပဲ အခြေခံမဲစာရင်းရနိုင်တယ်။ အဲဒီစာရင်း သူတို့ဆီကရပြီ။ အဲဒီစာရင်းမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေက အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် နံပါတ် တွေ မွေးသက္ကရာဇ်တွေက ၁၈ နှစ် ပြည့်လား။ လဝကမှာ Data ရှိတယ်။ အဲဒီနှစ်ခု မှန်ပြီဆိုမှ မဲစာရင်းကပ်တယ်။ ဒီဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခုမှာလည်း ပြည့်စုံမှု မရှိဘူးဆိုတာ အားလုံးသိတယ်”ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးအများ ယုံကြည်လက်ခံခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်မှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဟူသော ရွေးကောက်ပွဲ စံငါးချက်ကို ဦးတည်ကာ ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ဦးလှသိန်းကပြောသည်။ ”စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ သူ တွေဟာ စံငါးချက်နဲ့လုပ်နေပါတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ လာကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်မယ်။ မှန်၊ မမှန်၊ စံငါးချက် ပြည့်မီ၊ မမီ လေ့လာပါ။ အားနည်းချက်တွေကို တင်ပြပါ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်းအခမ်းအနားတွင် ပြည် ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းနှင့် Royal Norwegian Embassy in Myanmar သံအမတ် Mrs. Tone Tinnes တို့က မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဒုတိယငါးနှစ်တာ အမျိုးသားပို့ကုန် မဟာဗျူဟာ (၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၅)ကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပံ့ပ
မြောက်ဦးမြို့နှင့် ဘောင်းဒုတ်ကျေးရွာအနီးရှိ နယ်မြေခံတပ်ဌာနချုပ်များအား AA အဖွဲ့က ကျေးရွာအ??